जानिराख्नुस्, सर्पले टोक्दा के गर्ने ? के नगर्ने ?
Sunday,2Sep, 2018 11:42 AM
यतिबेला दैनिकजसो सर्पदंशका समाचारहरू आइरहेका छन् । विगतका वर्षहरूका तुलनामा सर्पदंशका घटना बढेको तथ्यांक आएको छ । नेपालको तराईं भेगमा सर्पदंशका घटना बढी हुन्छन्। नेपालमा एक वर्षमा सर्पदंशबाट ठ्याक्कै कतिले ज्यान गुमाउछन् भन्ने एकिन तथ्.ांक जभएपनि दर्जनौले ज्यान गुमाएको पाइन्छ । घाइतेको संख्या त निकै ठुलो छ । अमेरिकामा मात्र हरेक वर्ष ८ हजार मानिसहरु सर्पले टोकेर अस्पताल पुग्छन्। तीमध्ये ५ जनाको मृत्यु हुने गरेको पाइन्५ छ। अधिकांश अवस्थामा सर्पदंश खतरनाक हुन्छन्। सर्पले टोकेको स्थानमा पीडा हुने, सुन्निने हुनुका साथै तन्तुहरुलाई क्षति पु¥याउँछन्। यसका साथै आन्तरिक रक्तस्राब पनि गराउँछन्। अमेरिकी चिकित्सकले सर्पले टोक्दा के गर्ने र के नगर्न भन्ने विषयमा केही सल्लाह दिएका छन्।
सप्दंश भएमा तत्काल अस्पताल गइहाल्नुपर्छ । टोकेको त्यति विषालु नभएपनि टिटानस र केही गम्भीर ब्याक्टेरियल संक्रमणको खतरा हुनसक्छ। सकेसम्म टोकेको स्थानलाई अलि अलि भएपनि चलाउनुपर्छ, यसले विष अलि ढिलो फैलन मद्धत गर्छ।
सर्प कस्तो थियो भन्ने पनि याद गर्नुहोला। यसले चिकित्सकलाई उपचारमा सहयोग पुग्नेछ। सकेसम्म कुन स्थानमा टोकेको थियो भनेर पनि भन्नुहोला। टोकेको समय पनि ख्याल गर्नुहोला। यसले कति समयअघि टोकेको थियो भनेर उपचार गर्न सहयोग मिल्छ।
कुनै गहना छ भने सुन्निनुभन्दा पहिल्यै निकाल्नुहोला ।
आवश्यक पर्छ भने दुखेको कम गर्न टाइलेनोल (पारासिटामोल) खानुहोला ।
सर्पदंश उपचार केन्द्रको नम्बर सधैं साथमा राख्नुहोला।
सर्पलाई समात्ने या मार्ने प्रयास नगर्नुहोला। सर्पले फेरि टोक्न सक्छ ।
टोकेको स्थानमा चुस्ने प्रयास नगर्नुहोला। सर्पको विष मुखबाट गयो भने तपाईंका लागि अर्को खतरा हुनेछ।
टोकेको क्षेत्रमा बेस्सरी नबाँध्नुहोला ।
टोकाईको पीडा बिर्सन रक्सी सेवन नगर्नुहोला। बरु यसले विष चाँडो फैलन सहयोग गर्छ।
टोकेको ठाउँमा चिसो, आइस, तातो या कुनै पनि खालको मल्हम नलगाउनुहोला ।
एस्पिरिन, ब्रुफेन या अन्य खालको पेनकिलर नलिनुहोला। यस्ता पेनकिलरले रगत पातलो बनाउँछ।
टोकेको स्थानमा काटेर रगत झार्ने प्रयास नगर्नुहोला, यसले शरीरको तन्तु नष्ट गर्छ।